Tahriibayaal Soomaali u badan oo laga soo badbaadiyay xeebaha dalka Libya – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Tahriibayaal Soomaali u badan oo laga soo badbaadiyay xeebaha dalka Libya
Ugu yaraan 900 qof oo tahriibayaal ah ayaa la sheegayaa in laga soo bad-baadiyay meel ka baxsan xeebaha dalka Libya, kuwaas oo la sheegay inay u kala dhasheen dalalka Soomaaliya, Syria, Eritra, Pakistan, iyo Bangaladesh.
Ciidanka ilaalada xeebaha Libya ayaa warbaahinta u sheegay inta badan tahriibayaashaasi laga soo badbaadiyay ay saarnaayeen labo doon oo ka sameeysan Alwaax, kuwaas oo kusii jeeday xeebaha dalka Talyaaniga.
Sidoo kale, hay’adda bisha cas ee Libya ayaa sheegtay inay soo heleen meydadka 11 tahriibayaal ah oo kusoo caariyay xeebta Hay Al-andulus oo qiyaastii 15-km dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Tripoli ee caasimadda dalka Libya.
Dhinaca kale, wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Talyaaniga ayaa sheegtay inay sanadkii 2016-kii soo gaareen tahriibayaal ay tiradoodu dhan tahay 180,300 oo qof, kuwaas oo u kala dhashay dalal kala duwan oo ku kala yaala qaaradaha Afrika iyo Aasiya.
Ugu dambeyntii, war-qoraal ah oo ay Qaramada Midoobay soo saartay ayaa iyadana waxay ku sheegtay in 6,000 oo tahriibayaal ah ay naftooda ku waayeen badda mediteranean-ka oo u dhaxeeysa xeebaha dalalka Libya iyo Talyaaniga.